Dareenka cusub ee reer Barawe |
Dareenka cusub ee reer Barawe
Shacabka Baraawe, oo muddo ka badan lix sanadood ku soo hoos noolaa xukunkii adkaa ee cadaadiska badnaa ee al-Shabaab, ayaa markii ugu horreeysay ka hadlaya xukunkii kooxda ee arxanka darnaa.
“Haddii aan soo tiriyo dhibaatooyinkii aan kala kulannay al-Shabaab wax aan ku soo koobi karo saacado yar ma ahan,” ayay tidhi Faay Muudey, oo ah hooyo 41-jir ah oo leh lix carruur ah kuna nool Baraawe.
“Al-Shabaab waxay khasab ku guursan jireen gabdho badan oo u dhashay Baraawe. Waxayxoog ku askareeyn jireen carruurta, waxayna nagu khasbi jireen inaan guryaheena ka soo baxno si aan u daawano marka ay dadka ka jarayaan gacmaha iyo lugaha,” ayay tiri.
“Waxaa xitaa nalaku khasbay inaan daawannoqof nool oo dhagax lagu dilay,” ayay tidhi Faay, iyadoo ka hadleeysay dilkii dhowaan loo geystay Safiyo Axmed Jimcaale, oo ahayd haweeneey 33-jir oo ay al-Shabaab ku eedeeyeen inay niman badan guursatay dabadeedna ay caddeeyn la’aan dileen.
“Falalkaas aad ayay noo dhibeen, waxaana uu Allah naga xoreeyay xukunkii foosha xumaa ee al-Shabaab,” ayay tidhi.
Faay ayaa sheegtay inay dadka deegaanku hadda ku faraxsan yihiin inay xorriyad u heleen isticmaalka teknolojiyada sida telefishanada iyotaleefannada casriga ah, kuwaas oo ay al-Shabaab xannibtay sannad ka hor, si ay ugu xidhinaadaan dunida kale.
“Si la mid ah dadka ku nool Muqdisho, waxaan xor u nahay inaan wax walba sameeyno,” ayay tidhi Faay. “Qof kasta oo uu u qarsoonaa taleefan casri ah oo ka baqayay inay ku arkaan al-Shabaab wuxuu hadda awoodaa inuu wuxuu rabo ku daawado, waxaanan xittaa fiirsanaa [fiidiyowyada] heesaha. Waxaan daawannaa telefishanka waxaana ay carruurtu ciyaaraan kubadda cagta.”
Magaalada waxaa 6-dii October la wareegay askarta Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) iyagoo aan iska caabbin badan kala kulmin xagjiriinta al-Shabaab oo magaalada ka cararay maalin ka hor.
Hase ahaatee, ka hor inta aysan bixin, waxay al-Shabaab mar kale cabsi galiyaan shacabka, iyada oo uu hoggaamiyahoodii maxalliga ahaa Maxamed Abuu Cabdalla ugu digay khudbad uu jeediyay 5-tii October in ay xagjiriintu u soo noqon doonaan inay la dagaalaan kufaarta iyo dhammaan inta taageertay.
Shacabka oo rajo qaba inkasta oo uu amnigu khalkhalsan yahay
Khudbadii cabsida lahayd ka sokow, waxay shacabku soo dhoweeyeen imaanshaha ciidanka Soomaaliyeed iyo kan huwanta waxayna sheegayaan inay rajeeynayaan in la gaarsiiyo gargaar bini’aadamnimo oo degdeg ah iyo adeegyada caafimaadka ee asaasiga ah oo aan jirin intii lagu jiray xukunkii al-Shabaab.
“Waxaan ku faraxsanahay xornimada uu manta Allah na siiyay maaddaama uu naga dul qaaday dhibaatadii al-Shabaab,” ayuu yidhi Mumin Saalax Carab, oo ah oday dhaqameed 50-jir ah oo ka soo jeeda Baraawe.
Shacabku waxay baahi weyn u qabaan gargaar si ay uga soo kabsadaan xukunkii adkaa ee al-Shabaab, ayuu yidhi.
“Dadkani waxay u baahan yihiin raashin iyo gargaar caafimaad. Qaar ka mid ah ma shaqeeyn karaan waayo al-Shabaab ayaa si sharci darro ah uga jartay gacmihii iyo lugihii walina wax gargaar [caafimaad] ah kama aysan helin cidna,” ayuu Carab yiri.
Dadkii la kulmay bahalnimada kooxda waa ay dhibban yihiin oo lama hadli karaan saxaafadda waayo waxay ka baqayaan inay al-Shabaab beegsato, ayuu yidhi, wuxuuna raaciyay in sababta markii horeba ay kooxdu uga jartay gacmaha iyo lugaha inay ahayd in la ciqaabo ka dib markii loo arkay inay ka soo horjeedeen fikradaha al-Shabaab.
“Odayaal dhaqameedkii magaalada ahaan, waan garaneeynaa dadka ay lugaha iyo gacmaha ka jartay al-Shabaab, laakiin [ma magacaabeeyno] waayo waxaa jirta cabsi ah in al-Shabaab ay mar kale beegsato,” ayuu yidhi.
Tusaale ahaan, xagjiriinta al-Shabaab waxay madaxa ka gooyeen odaygii 70-jirka ahaa ee reer Baraawe Maxamed Qambi habeenimadii Khamiista (16-kii October), sida uu sheegay Wacaal-ka Soomaaliya. Odayga, oo degganaa Baraawe 20-kii sano ee la soo dhaafay, waxaa lagala baxay gurigiisa waxaana maydkiisii lagu soo tuuray magaalada dhexdeeda.
Jowhar ayaa warisay in Qambi uu ka mid ahaa oday-dhaqameedyadii la kulmay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud markii uu magaalada booqday 11-kii October.
Dhacdada ayaa waxay timid muddo yar ka dib markii ay ciidamada ammaanka Soomaaliya baadhitaan ku sameeyeen Baraawe subaxnimadii Khamiista si ay uga mariyaan haraadigii al-Shabaab.
“Ciidamada ammaanku waxay hawlgalkan ugu dambeeyay ee ammaanka u sameeyeen inay hubiyaan in Baraawe ay nabad u tahay shacabka,” ayuu yidhi Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur. “Ugu yaraan hal darsin oo tuhmaneyaal dhallinyaro ah ayaa la qabtay. Waxaan hadda ku wadnaa su’aalo.”
Dhiniciisa, guddoomiyaha degmada Baraawe Shaacir Cabdi Cilmi ayaa sheegay inuu madaxweynaha kala hadlay dhibaatada bini’aadamnimo ee ka jirta Baraawe markii uu magaalada soo booqday usbuucii hore.
“Shacabka Baraawe waxay hadda dareemayaan xornimo buuxda, laakiin waxay u baahan yihiin gargaar sida biyaha, oo aad u yar, iyo cunno,” ayuu Cilmi yiri. “Dhanka caafimaadka, waxaa jira kaliya tiro yar oo farmashiyaal ah oo iibiya xoogaa daawo ah iyo dhowr dukaan oo iibiya raashin.”
Cilmi wuxuu sheegay inay jawaab ka sugayaan madaxweynaha oo ballan-qaaday inay dawladdu “baahiyaha asaasiga ah u buuxineeyso sida ugu dhaqsaha badan”.
“Waxaan sidoo kale ugu baaqeeynaa hay’adaha caalamiga ah iyo Soomaalida qurbojoogta ah inay walaalahooda Baraawe jooga ku caawiyaan wixii ay awoodaan,” ayuu yidhi.